TeamKeeper: Mee ka njide nke mmụọ nke oge a na nchịkwa nchịkwa | Martech Zone
TeamKeeper: Mee ka njide nke onyinye nke oge a na nchịkwa nchịkwa
Tuzdee, Machị 28, 2017 Douglas Karr
Hiregwọ ọhụụ nyere ajụjụ ọnụ ahụ, mana arụbeghị nke ọma dịka ọ tụrụ anya ya. Otu ndi otu anaghi eti ihe maka na ha anaghi azu azu. Ndị ahịa nwere ọgụgụ isi na-ahapụ ụlọ ọrụ ahụ n'ihi na ha anaghị eche na ha na-arụ ọrụ ahụ.
Onye njikwa ahia na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ọnọdụ niile dị n'elu. Ndị njikwa siri ike bụ isi ihe ga-aga nke ọma na nzukọ, mana naanị 12% nke ndị ọrụ US kwenyesiri ike na ndị njikwa ha na-enyere ha aka isetịpụ ọrụ - ndị 12% ahụ nwere ọ happụ na ọrụ ha karịa ndị ọzọ.
Mgbalị ndị a bụ ihe mkpali maka TeamKeeper, a ọhụrụ talent njigide n'elu ikpo okwu na leverages data na-enye ahaziri aro maka chọpụtara, emepe emepe na-ekere òkè n'ọrụ.
TeamKeeper na-eji usoro data eme ihe banyere njikwa ikike n'ụzọ siri ike n'ụzọ siri ike, na-ahụ na njikwa abụghị usoro ọ bụla. Usoro na ndị mkpali maka Bonnie dị iche na Jeff, na nghọta ndị TeamKeeper nyere na-enye onye njikwa ohere ịrụ ọrụ na nke ọ bụla iji nweta ọtụtụ ọrụ ya. Ezubere nyocha nke TeamKeeper, ntọala ebumnuche, ngwa ọrụ na mmetụta mmetụta ka emebere ndị njikwa ka mma, yabụ na ha agaghị ama onye na mgbe ị ga-azụ, mana otu.
Ma ngwá ọrụ anaghị enyere naanị aka ijikwa talent dịnụ; ọ na - enyere aka ịchọpụta talent ọhụrụ ga - abụ ihe kwesịrị ekwesị maka ọrụ ahụ. Nlekọta ahaziri iche nke TeamKeeper na-ebu amụma ihe ịga nke ọma nke ndị ga-aga ime site na ịkpa agwa ha na ndị achọrọ ịrụ otu ọrụ. Ndị na-ere ahịa nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ajụjụ ọnụ (ha maara otu esi ere onwe ha!) Mana onye njikwa nwere ike ịchọpụta na oge gaferela na onye ahụ erughị eru maka ọrụ ahụ.
Nyere na ọ na-efu Olee ihe enyemaka 20% nke ụgwọ onye ọrụ iji dochie onye ahụ, yana 52 ụbọchị maka ụlọ ọrụ iji mejupụta ebe mepere emepe, ime mkpebi mkpebi ziri ezi na nke mbụ dị oke mkpa site na arụmọrụ na uru bara uru. TeamKeeper na-arụ ọrụ dịka otu ngwa ọrụ - site na nchọta ya na nghọta nghọta na ndụmọdụ na mmepe. Inye onyinye kacha elu, ka ị na-azụkwa ma na-eme ndị otu dị ugbu a dịka mkpa ha pụrụ iche, ga-enyere aka wepu ntụgharị.
Ihe data na-enyere aka na-aga n’ihu nke onye ọrụ, mana na-enyekwa ezigbo oge iji nye ndị njikwa “pulse” na otu ha. Nyocha ndị ahaziri iche nke TeamKeeper na ngwa ọrụ nzaghachi kwa izu na-eme ka ọ dịkwuo mfe iwulite ọdịbendị nke ịza ajụjụ, na-eme ka ndị ọrụ were ọrụ ma melite mmụọ gafere otu ahụ. N'ịbụ ndị nwere data a na-eme ihe, na-enye ndị ọrụ ikike ijigide ikike dị elu, kụrụ ọnụ ahịa ahịa ma bulie ego ụlọ ọrụ zuru oke.
Nghọta ndị a nwere ike ikpughe karịa. Iji maa atụ, manịja nwere ike ọ gaghị ama na onye were ọrụ dị jụụ ma ọ bụ onye na-etinye onwe ya n'ọrụ na-achọ iru n'ọkwa, ma ọ bụ ịzụlite ọrụ ọ bụla. Ọ bụghị naanị na TeamKeeper ga-ewepụta ozi a, mana ọ ga-anapụta usoro njikwa ahaziri iji nyere aka nweta ọtụtụ ndị otu otu a.
Ihe omuma nke ihe omuma nke ikpo okwu na-enye ulo ahia nke na enyere ndi oru ahia aka oru ha, tinyere:
Roster Owuwu: Nchọpụta nke onwe na-egosi ihe ịga nke ọma nke ndị ga-aga ime site na itinye agwa ha na ndị achọrọ ịrụ ọrụ ụfọdụ.
Nkuzi: Egwuregwu TeamKeeper wuru, ntọala ebumnuche, ngwa ọrụ na itinye ọkwa na-enye ndị nkuzi nhazi ahụ, yabụ ndị njikwa agaghị ama onye na mgbe ị ga - azụ ọzụzụ, kama otu esi eme ya.
Njikọ aka na Omenala Owuwu: Ahaziri nnyocha na kwa izu nzaghachi ngwaọrụ na-eme ka ọ dịkwuo mfe na-ewu a omenala nke aza ajụjụ, idebe ọrụ aku na-akwalite omume ọma gafee otu.
Ntọala Mgbaru Ọsọ na ịgbaso: Ebumnuche ebumnuche nyere ndị njikwa aka ịtọpụta ebumnuche ndị akọwapụtara, nke nwere ike ịnweta ma nweta site na iji SMART ebumnuche ma ọ bụ OKRs (ebumnuche na nsonaazụ isi). Akpadoro ozi ịntanetị na-akpaghị aka na-egosi ire ere na ọganiihu ha ma melite TeamKeeper dashboard.
Edu ahia ahia: Atụmatụ ndepụta ị ga-eme kwa ụbọchị, atụmatụ njikwa maka onye otu ọ bụla na ndụmọdụ iduzi kwa ụbọchị bụ ụfọdụ n'ime ụzọ TeamKeeper si eme ka ọ dịrị ndị ọrụ nchịkwa kachasị mfe ịrụ ọrụ.
Mwekota: TeamKeeper nwere ike iwekota na otutu igwe ojii nke dabeere na igwe ojii, usoro HR na sistemụ mmụta mmụta. Ọ na - enye aka imebi ọnụ ọgụgụ dị n'etiti HR na njikwa iji chọpụta ndị ga - aga nke ọma ga - eme nke ọma ma mee ka njigide ndị ọrụ.
Isi okwu bụ na site na ịge ndị ọrụ ntị na ịhazi usoro njikwa ha, ụlọ ọrụ nwere ike ịbawanye ego, uru na mmụọ ka ịbelata ejije n'ebe ọrụ.
Tags: ihe mgbaru ọsọụlọ ọrụnyocha ahịaịnye ọzụzọ ahịaomenala ire ereNkwado ire ahịantinye akaahịa ndị ahịaire ihe mgbaru ọsọihe mgbaru ọsọ ire eremmetụta ahịanjikwa ahiaogo ogoahịaonye na-ere ahịa ahịa ahịaonye otu